Mandalay | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Mandalay ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ
Self confident and motivated manager who can be targeted planning and resulted oriented manager is welcomed to sell Truck, Engine oil , Generator .
Self confident and motivated manager who can be targeted planning and resulted oriented manager ...
Chinese Translator for Agriculture Business
B.E/B.Tech, Sugar & Alcohol Technology or related and 8 to 10 years Combined experience in grain and/or molasses based Distillery and Bottling.
B.E/B.Tech, Sugar & Alcohol Technology or related and 8 to 10 years Combined experience in grain ...
To manage the whole operation of Thiri Cosmetic Co., Ltd. ( Mistine ) - Mandalay Branch
Coordination, Communication, Data Analyzing with all Departments and Support GM.
Overall Agriculture- Tractor (Spare Parts Management)
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။